သင်၏စီးပွားရေးအတွက် Yammer နှင့်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ
Yammer နှင့်အတူ Workstreaming
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သောကြာနေ့က Harold Jarche နဲ့ငါတို့စကားမပြောခင်ဒီဝေါဟာရကိုငါတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး အလုပ်လက်မဲ့။ ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ လမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီသည်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် ရိုဝီ အလုပ်ခွင်။ ROWE သည်ရလဒ်သာလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုပြီးဆုံးသည်အထိဆန္ဒရှိသဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အာဏာအပ်နှင်းထားသည်။
အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုအနေဖြင့် ROWE နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့ကဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့သည်လုံးဝ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့!) တုံ့ပြန်ကြသည်။ ငါအလုပ်ကို ဦး ဆောင်နေတဲ့အခါငါကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်တာကိုမုန်းတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်မမျှတပါ။ သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည်။
အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြissuesနာများသည်အီးမေးလ်များနှင့်အစည်းအဝေးများစွာမှကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျဆင်းခြင်းကို ၀ န်ထမ်းများအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကအချို့သောအဖွဲ့အစည်းများ Workstreaming မှလှည့်ပါပြီဟုဆိုသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Workstreaming သည် ၀ န်ထမ်းများအားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသောသင်ဆက်သွယ်နေသောနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သို့သော်သင်နှင့်နီးစပ်သူများအားသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ၊ သင်အကူအညီလိုအပ်နိုင်မည့်အချိန်နှင့်ရလဒ်များကိုမျှော်လင့်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပုံရသည် Yammer ဒီအဘို့ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်နိုင်သည်!
Yammer သည်လူသုံးများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအချိန်နှင့်နေရာအနှံ့ဆက်သွယ်ပေးသောလွယ်ကူပြီးခွန်အားကောင်းသော micro-blogging application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Facebook (သို့) တွစ်တာနှင့်ဆင်တူသည်။ ခြားနားချက်မှာ Facebook သည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဒိုမိန်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးသော်လည်း Yammer သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၀ န်ထမ်းများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားမိတ်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်အခြားသူများကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အသုံးပြုသူဗဟိုပြုလူမှုဆက်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကွင်းဆက်။
Yammer ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂလိကလူမှုကွန်ရက်သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးအမြတ်များစွာပေးသည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းများအားပါ ၀ င်ပတ်သက်စေခြင်းနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များမြန်ဆန်စေခြင်း၊ နှင့်ရလဒ်နီးပါးချက်ချင်းဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Yammer သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည့်စွမ်းရည်နှင့်နည်းပညာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်တသမတ်တည်းနှင့်ထိရောက်သောပူးပေါင်းကိရိယာတစ်ခုကိုပေးသည်။ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့်သူတို့ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုချောမွေ့စွာစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကစိုးရိမ်မှုမှာဒေတာလုံခြုံရေး။ Yammer ၏တစ် ဦး တည်းသောကွဲပြားခြားနားသောအချက်မှာ (Facebook နှင့်အခြားအများသုံးကွန်ရက်စာမျက်နှာများဖြစ်သည်) အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် portal သည်ထိပ်တန်းအဆင့်လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်တစ်မိုင်ကျော်သွားသည်။ Yammer သည်လုံခြုံရေးသုံးသပ်ချက်များကိုဒီဇိုင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုအဆင့်များတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးသည် SSL / TLS ကိုဖြတ်သန်းပြီးကွန်ယက်များအတွင်းယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်အချက်အလက်များသည်နိမ့်ကျသောယုတ္တိတန်သော firewalls များမှတဆင့်စီးဆင်းသည်။ ဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်အချက်အလက်ဆာဗာများမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယုတ္တိနည်းကျကျကွဲကွာနေသည်။ ဤကာကွယ်မှုများအပြင်စက်ရုံ၏အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သောနာရီကြည့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ biometric နှင့် pin based locks၊ တင်းကျပ်သော ၀ န်ထမ်းများဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ၊ အသေးစိတ် visit ည့်သည်များမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းများ၊ လုံခြုံရေးထစ်။
နောက်ကျော Workstreaming ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားသော ဦး စားပေးမှုများ၊ အချိန်ဇယားများ၊ တည်နေရာများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အလေ့အထများ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Yammer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ့ကိုတီထွင်သူလို့ခေါ်မယ့်အစား Yammer ကိုကြည့်ပြီးသူဘာဖြစ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာရနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်သာအကျိုးရှိသည်မဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှိနိုင်သည့်ဆူညံသံများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
Yammer တွင်လည်းနှစ်ခုလုံးရှိသည် desktop နှင့် mobile application များဖြစ်သည် ရရှိနိုင်သည့် Skype နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
Badgeville - Gamification မှတဆင့်အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းကိုအားပေးခြင်း
ဇွန် 25, 2012 မှာ 4: 15 pm တွင်
ယနေ့တွင် Microsoft မှ Yammer ကို ၀ယ်ယူလိုက်သော စိတ်ဝင်စားစရာသတင်း။ ကောင်းမွန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဇွန် 26, 2012 မှာ 10: 49 pm တွင်
ငါပြောရမယ် - ငါဒီကိရိယာကိုသုံးရတာတကယ်ပျော်တယ်။ ငါလိုအပ်တာအားလုံးက တွန်းအားပေးခြင်းပဲ။ အီးမေးလ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား အသိပေးခြင်းနှင့် ပရောဂျက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ Facebook နှင့်တူသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွက်သာဖြစ်သည်။